चिडियाखाना अवलोकनका लागि घरबाटै टिकट – NepalDailyPost
जुम्लामा पुनः हिमपात, सरकारी कामकाज र यातायातसमेत प्रभावित
चिनियाँ जेलमा रहेका ४०० व्यक्तिमा पनि देखियाे कोरोना भाइरस
महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस–टुँडिखेलमा बढाइँ
महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस–टुँडिखेलमा बढाइँ – समारोहमा राष्ट्रपति सरिक
दुई लाख घुससहित खानेपानीका प्राविधिक पक्राउ
नेपाल डेली पोस्ट२०७६, ९ फाल्गुन शुक्रबार १६:०३
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहमा सरिक…
महरा निस्किँदा प्रचण्डलाई झड्का लागेथ्याे, बाँस्काेटा बाहिरिँदा ओलीलाई झड्का
नेपाल डेली पोस्ट२०७६, ९ फाल्गुन शुक्रबार ११:४६
दुई वर्षअघि फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओलीले एउटा नारा अघि सारे, ‘म आफू भ्रष्टाचार…
नेपाल डेली पोस्ट२०७६, ९ फाल्गुन शुक्रबार ११:४०
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएर बालकोट पुगेपछि अडियो प्रकरणबारे बोलेका छन्।…
‘मन्त्री नै यतीको एजेन्ट’
नेपाल डेली पोस्ट२०७६, ९ फाल्गुन शुक्रबार ११:३८
सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य धर्मशिला चापागाइँले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले…
नेपाल डेली पोस्ट२०७६, ८ फाल्गुन बिहीबार १५:३८
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा चुस्त राख्न मातहतका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रहरी प्रधान…
अङ्गीकृत नागरिकता एकसय ७५ ले लिए
नेपाल डेली पोस्ट२०७६, ८ फाल्गुन बिहीबार १२:३६
नयाँ संविधान विस २०७२ मा जारी भएपछि दाङजिल्लाबाट १७५ ले अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय…
नेपाल डेली पोस्ट२०७६, ८ फाल्गुन बिहीबार ११:४६
सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भने सङ्घमा केन्द्रित भएका छन् । कर्मचारी…
संघीय प्रणाली नागरिकको जीवनपद्धतिसँग जोडौं – मुख्यमन्त्री
नेपाल डेली पोस्ट२०७६, ७ फाल्गुन बुधबार १६:२९
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीलाई नागरिकको जीवन पद्दतिको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको…
आज महाशिवारात्रि मनाईदै
श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरी हेर्नुहोस् तपाईंको आजको राशिफल – वि.सं. २०७६ फाल्गुन ०९ गते शुक्रबारकाे राशिफल
श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरी हेर्नुहोस् तपाईंको आजको राशिफल – वि.सं. २०७६ फाल्गुन ०८ गते बिहीबार
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ९ माघ बिहीबार १२:४३
तपाईं चिडियाखानाका वन्यजन्तु हेर्न कति समय लाइन बसेर टिकट काट्नुहुन्छ ? कहिलेकाहीँ त घण्टौँ कुर्नुभयो होला, तर अब यो झन्झटबाट मुक्त हुनुभएको छ । तपाईंले घरमै बसिबसी टिकट ‘बुक’ गर्न सक्नुहुन्छ ।
जावलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखानाले अवलोकनकर्ताका लागि घरमै बसेर टिकट काट्ने व्यवस्था गर्न लागेसँगै दर्शकका लागि लाइन बस्ने समस्या टर्ने भएको हो । अवलोकनकर्ताको ध्यानलाई मध्यनजर गर्दै चालू आर्थिक वर्षभित्रै यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागेको सदर चिडियाखानाले जनाएको छ ।
पहिलोपटक गर्न लागिएको यस कामका लागि चिडियाखाना व्यवस्थापन पक्ष अहिले अभ्यासरत रहेको चिडियाखाना व्यवस्थापन प्रमुख डा चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले राससलाई जानकारी गराउनुभयो । अनलाइनबाट टिकट काट्ने व्यवस्थासँगै अवलोकनकर्ताको समय बचत हुनुका साथै कर्मचारी अभावको समस्या पनि टर्ने डा पोखरेलले बताउनुभयो । टिकट काट्नका लागि भन्दै अहिले दैनिक पाँच कर्मचारी खटिएका छन् । तर आगामी दिनमा एक कर्मचारीले मात्रै अवलोकनकर्तालाई टिकट उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
प्रवेशद्वारमै सूचना केन्द्र
अवलोकनकर्तालाई ध्यानमा राखेर चिडियाखाना व्यवस्थापनले प्रवेशद्वारमै सूचना केन्द्र स्थापना गरी विद्युतीय सूचनापाटी राखेको छ । सूचनापाटीबाट चिडियाखानामा राखिएका जनावरका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । दश महिना स्थापना गरिएको सूचना केन्द्रबाट अवलोकनकर्तालाई निकै सहज भएको छ । सूचनापाटीमार्फत कुनकुन जनावर राखिएको छ रु, त्यसको विषेषता के हो, कहाँ पाइन्छ रु पाउन कतिको सहज छ रु के खान्छ रु र कति वर्ष आयु छ रु जस्ता विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने छ ।
त्यसैगरी टिकट लिएर प्रवेश गर्ने बेलामै अवलोकनकर्ताले हाल के कति जनावर रहेका छन् र कुनको सङ्ख्या कति छ जस्ता विषयको जानकारी सहजरूपमा लिन सक्नेछन् । यति मात्रै होइन, कुन जनावर कुन स्थानमा राखिएको छ भनी हेर्नका लागि सहज बनाइएको छ । हाल चिडयाखानासँग साथीको रूपमा सम्बन्ध स्थापित भएका २०० विद्यालयका पाँच हजार विद्यार्थी सहभागी हुँदै आएका छन् । सूचना केन्द्रलाई यी विद्यार्थीका कारण निकै सहज भएको छ ।
चिडियाखानामा ११९ प्रजातिका एक हजार ९८ जीवरजनावर छन् । मुख्य आकर्षणका रूपमा बाघ, भालु चितुवा, रेडपाण्डाजस्ता जनावर छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ ।
पछिल्लो सयय काठमाडौँ उपत्यकामा कम हुँदै गरेको खुलास्थान र जीव÷जनावर हेर्ने चाहनाका कारण चिडियाखानामा आउने अवलोकनकर्तामा कुनै कमी आएको छैन । अवलोकनका लागि विदेशीका लागि रु ७५०, सार्क राष्ट्रका पाहुनाका लागि रु ५००, नेपालीलाई रु १५० र विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ९० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । वार्षिक ११ लाख दर्शक अवलोकन गर्न आउने यहाँ रु १५ करोडको आर्थिक कारोवार हुने गरेको छ ।
उद्धार केन्द्र अभाव
सदर चिडियाखानामा विभिन्न जीवजन्तुलाई संरक्षण गर्न पहिलो चरणमा ल्याएर राखिने उद्धार केन्द्रको अभाव छ । जङ्गली जनावरले समयसमयमा मानवबस्तीमा आएर समस्या पार्ने गरेकाले तीनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी मानवबस्तीमा आएर दुःख दिने जनावरलाई पहिलो चरणमै चिडियाखानामा राखिएको अन्य जनावरसँग घुलमिल गराएर राख्न समस्या हुन्छ । तिनलाई लामो समय स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने भए पनि चिडियाखानामा यस्तो स्थानको अभाव छ ।
“प्रत्येक वर्ष १०र१५ जीवजन्तु यहाँ संरक्षण गर्नुपर्छ, संरक्षण गरिएको जीवजन्तुलाई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म अवलोकन गर्नका लागि राख्न सम्भव हुँदैन, पशु चिकित्सकको निगरानीमा संरक्षण गरी राख्नुपर्छ, तर स्थान अभाव छ”, प्रमुख व्यवस्थापक डा पोखरेलले भन्नुभयो । चिडियाखानाका सूचना अधिकारी लीना चालिसे उद्धार केन्द्र मात्र नभएर पछिल्लो समय जीवजन्तुको सङ्ख्या बढिरहेकाले स्थान अभाव पनि भएको बताउनुहुन्छ। रासस
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २० लाखकी ‘पर्यटन परी’, पर्यटनमन्त्री नै दंग परे
खोटाङको हलेसीस्थित ककनीडाँडामा ढुङ्गे बगैँचा निर्माण गरिने
भ्रमण वर्ष र आयुर्वेदिक उत्पादनका लागि रामदेवले १ हजार योगगुरु नेपाल ल्याउने
एयरलायन्स चलाउन अब ३ वटा जहाज हुनैपर्ने
PREVIOUS Previous post: राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतदान शुरु
NEXT Next post: संस्कृति संरक्षणमा महिला
भारतमा मिनीबस दुर्घटना हुँदा ६ नेपालीको ज्यान गयो, १८ जना घाइते
महाशिवरात्रि, पशुपति र बाबा
भिसाको विवरण आफूखुसी सच्याए पाँच वर्ष कैद